Ingcwethi Zemithetho: Amalunga Edale Lephalamende Alamandla Okufuqa Inguquko
Ingcwethi kwezemithetho zithi inkinga enkulu ngedale lephalamende leZimbabwe yikwehluleka ukuqhakathekisa indaba okumele ziqakathekiswe kuqala, ngoba amalunga ecabanga ukuthi lo ngumsebenzi wenkokheli yengatsha zikahulumende. Ngakhoke zikhuthaza amalunga edale lephalamende ukusebenzisa amandla alawo, ukuze kwenziwe ngesikhathi esiqondileyo okumele kwenziwe zinhlangothi ezithi olwemithetho lolwabampathintambo.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni lamalunga edale lephalamende oqoqwe ngabenhlanganiso yamaqhwetha alwela ilungelo loluntu eye Zimbabwe Lawyers for Human Rights,owenzelwe eweteleni ye Crown Plaza ngoLwesine ekuseni, lapho kukhangelwa inkinga uhlangothi lwezokulondolozwa kwezibotshwa elubhekane lazo.
Beyikhona inkokheli evele kuhlangothi lwezamajele olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Services, eveze ukuba babhekane lobunzima bokusilela kwemali yokusebenzisa, okuyinto efakazwe nguye wonke umuntu obekulomhlangano.
Enye yalezingcwethi ebikade ikulomhlangano u Preoffessor Lovemore Madhuku, utshele amalunga la ukuba ayehluleka ukuwuqhuba umsebenzi ngoba elibala ukuba asedale nje ngoba akhethwa nguzulu ukuzammela kodwa ekhetha ukulandela izifiso zamabandla ezombusazwe lapho avela kizo.
UMadhuku uthi akumelanga ziwukhohlwe umsebenzi wawo la malunga wokubona ukuba ziqhuyawu qhuba ngendlela na umsebenzi wokuhlelwa kwemali kahulumende,angakhohlwa ukuba kuyowo azakuphazamiseaka ekuqhubeni umsebenzi kusukela kundlela kuhlelwe ngayo leyo mali yelizwe.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezinduna, unduna Mtshani Khumalo, utshele intathelizindaba ukuba uvumelana lenkulumo ethi kumele aqhube umsebenzi ngendlela amalunga edale lephalamende hatshi ukuqakathekisa amabandla ezombusazwe lapho bavela khona.
Wengeza ethi kodwa abhekane lobunzima lawa malunga edale lanxa efisa ukuqhuba umsebenzi ngendlela ngoba besesaba ukujeziswa lapho bephambuke kuzifiso zamabandla abo ezombusazwe, lalapho besazi ukuba kuphambuka emisebenzini yabo yokumela izifiso zikazulu owabakhethayo.
Ummeli wesigaba sakoBulawayo unkosazana Dorothy Molly Ndlovu uthi okutshiwo zingcwethi kwezomthetho, kuliqiniso njalo kubazwisa ubuhlungu ukuba bacina sebengeniswa emfolweni ukuthi bafeze izifiso zabanye eziphambana lezalabo ababakhethayo ukuba sedale lephalamende.
Wengeza uMaNdlovu ethi kuqakathekile ukuba ulwazi phezu kokusebenza kwamalunga edale lephalamende, lufinyelelwe yiwo wonke amalunga, ukuze azi ukuba vele aphatha sigaba bani ekuthini uhulumende aqhube umsebenzi wakhe ngendlela.
Wengeza ethi uvumelana lalombono okhuthaza ukusebenzelana lentathelizindaba ekuthini kusabalalele kuzulu lokho okungabe kukhulunyisanwa ngakho edale, kuphathise ekuthini inkokheli kungatsha zikahulumende zenze lokho okumele zikwenze.
Umhlangano walamuhla ubukhangela umsebenzi wamalunga edale, ekuhlaleni ehlabe ilihlo kunkokheli zengatsha zikahulumende phezu kokusebenza kwazo. Ungenwe ngamalunga edale lephalamende akumakhomidhi abalisa ebona ngezokulondoloza ilungelo loluntu, ebona ngezokulotshwa kwemithetho, kanye lephatha umsebenzi wokubona ukuba imithetho ma ilungiswa, ihambelana lesisekelo sombuso na.
Ebekhona njalo lamalunga avele kwezinye inhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke emisebenzini yokuphathisana lozulu osentolongweni.